Get Chance | Prizes
02-01-2017 ~ 02-02-2017
ဤဆုအား GCMoney 2000 ဖြင့် ကံစမ်းပါ။
ကံထူးရှင်အတွက် ဆုမဲထုတ်ပေးရာတွင် အချိန်နှင့်နေရာကို mail ဖြင့် အကြောင်းကြားပေးခြင်း၊ https://www.facebook.c om/GetChanceMyanmar တွင်ကြေငြာပေးခြင်းဖြင့် အကြောင်းကြား သွားပါမည်။ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လာမထုတ် ပါက (လုံးဝ) ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။
★★★ စည်းကမ်းချက်များအားလိုက်နာမည်ဆိုပါက အောက်ပါ ဆုရွေးမည်ခလုတ်အား နှိပ်၍ ဆုစတင် ကံစမ်းနိုင်ပါသည်။ ★★★
COPYRIGHT © 2018 GET-CHANCE.ASIA
ဤဆုပစ္စည်းအား ကံမစမ်းမီ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ဖြည့်ပါ။
ရွေးပါ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄
ရွေးပါ က ခ ဂ ဃ င စ ဆ ဇ ဈ ည ဋ ဌ ဍ ဎ ဏ တ ထ ဒ ဓ န ပ ဖ ဗ ဘ မ ယ ရ လ ၀ သ ဟ ဠ အ ဥ
ရွေးပါ (နိုင်) (ပြု) (ဧည့်) (သ) (သီ) (ယ)
မှတ်ပုံတင်အား မှန်ကန်စွာ ဖြည့်ပေးပါ။ မှတ်ပုံတင် မမှန်ကန်ပါက ဆုပစ္စည်း ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။
To apply this prize, you must use GCMoney ( 2000 ). If you want to apply this prize, click apply now.
Choose Occupation marketing sales account&finance advertising management officestaff government teacher ownbusiness doctor lawyer engineer army highschoolstudent universitystudent realestate customerservice translator carsales software network factorystaff restaurant hotelservice travel&tour construction sportplayer consultant housewife religiousaffairs hospital medical police inoccupation other
Choose Address yangon mandalay pago ayayarwaddy sagaing magway tanintharyi kachin kayah kayin chin mon rakhine shan naypyidaw